Ụbọchị My Pet » Yappily Mgbe Mgbe: Ị dị njikere maka a 'blended Family'?
Ịhụnanya & Mmekọahụ Ndụmọdụ maka okenye mmekọrịta chiri anya.
Pet enyi na enyi
NsorouzọHomeNdụmọdụỊhụnanya & MmekọahụMbụ ỤbọchịOnline AtụmatụPet enyi na enyi
site Hapụ Ann
Yappily Mgbe Mgbe: Ị dị njikere maka a 'blended Family'?
emelitere ikpeazụ: Jul. 03 2020 | 3 min agụ
Ọ bụrụ na ị malitere ịlụ a ibe Pita n'anya, na i nwere ihe dị mkpa na-emekarị: ịhụnanya gị maka ụmụ anụmanụ. Anu ulo bụ akụkụ nke ezinụlọ gị. Eleghị anya ị na-eche gị na anu ulo na a ngwugwu ndibiat; ọ bụrụ na gị ụbọchị nwere ike ghara inwe tinyere gị anu ulo, ọ bụ oge anya n'ebe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na gị anu ulo na mgbe niile na-akpa, olee otú ị iwekota a ọhụrụ ịhụnanya mmekọrịta na ndụ gị? Ọ gị ụbọchị zutere gị anu ulo? Dị ka otu nne na nna, ụfọdụ Pita nwe-echere ịhụ otú mmekọrịta na-aga n'ihu na-eweta ịhụnanya ha nwere mmasị n'ụlọ izute “na anu ulo.” Ị dị ka ụzọ gị ụbọchị interacts na gị Pita? Gị enyi ọhụrụ ime mgbalị ịmara gị Pita? M nụrụ na onye nwere a icheku, ọ na-achọ a nnụnụ behaviorist aka ya nnụnụ na-anabata ọhụrụ ya na enyi nwanyị n'ime ha “ìgwè ewu na atụrụ.” The oge, mgbalị, na ịhụnanya enyi nwanyị nyekwara ya nnụnụ bụ otu n'ime ihe nke ya obi ike na nwanyị a bụ “onye.” Ha lụrụ, na nnụnụ ahụ ụtọ.
Ndi gị ụbọchị na-adabara oké na ụmụ anụmanụ na, ma na-emeso unu dị ka a eyi-apụ nkịta egwuregwu ụmụaka? Ọ bụ ezie na m kweere n'anya n'ihi na ụmụ anụmanụ bụ-egosi ike n'anya n'ozuzu, mgbe ụfọdụ otu onye nwere ike na-eche “nke abụọ-na klas” na nke ọzọ si anu ulo. Ọ dị mkpa ka nwere nguzozi ebe a. Mgbe m maara na nwoke ukwuu nwayọọ mmetụta ịhụnanya na upscale deli emeso ya nkịta, ma ọnụ ọjọọ ma tie ya na enyi nwanyị.
Ị mgbe a jụrụ ịhọrọ a na onye òtù ọlụlụ na a Pita? Azịza ya bụ na-emekarị na-ahụrụ n'anya, ka onye na-aga. A ụdị, n'anya onye ahụ ga-ala azụ na-enye gị ihe dị otú ahụ ofufe. (Ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ nwere oké allergies ma ọ bụ a pathological egwu gị Pita, ndị a okwu ike mgbe a ga-egbo na ọkachamara enyemaka, ma ọ bụrụ na mmekọ dị njikere.) Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-achọ na ị họrọ na-erughị ala na-achịkwa, na ike iguzo “na-ekere òkè” unu na-a Pita. Ha na-abụghị ihe unu mmetụta; naanị ha onwe ha. Ọzọkwa, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ekwu goodbye ka gị Pita, onye gị na ọ ga-abụ na-ekwo ekworo ihe ndị ọzọ: oge gị na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ, gị na-arụsi ọrụ, ntụrụndụ, ọbụna ikekwe ọrụ gị. Ya mere, kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-jụrụ ime ka ndị dị otú ahụ a na-ahọrọ.
Ajụjụ maka nke Abụọ nke Ị:
– Ị nwere zuru iji kwado a mmekọrịta wezụga gị ima nke ụmụ anụmanụ?
– Olee otú gị na anu ulo na-tinyere onye ọ bụla ọzọ? Ọ otu onye n'ime unu nwere nwamba, na nnụnụ ndị ọzọ? Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ nwere ihe ize ndụ nke yiri ekwekọghị anu ulo?
– Ndi abụọ i nwere echiche dịgasị iche banyere gị anu ulo’ ndụ? Ọmụmaatụ, ka o chee na ya cat kwesịrị nọrọ n'ime ụlọ na-ehi ụra na ya na bed, ma ọ ike na-ekwere na nwamba nwe n'èzí? Ọ bụrụ na o nwere nnụnụ na-ekwusi ya ga-esi organic veggies na na-ụdịdị dị iche iche ọkụ, otú ọ na-atụle nke a na-overindulgent n'efu ego? Ọ bụrụ na mgbe ọ bụla ọ na-akpali ọ na-ewe ya na nkịta na ya, otú o-enweghị mmasị n'ebe nkịta ume na ya ntị?
– Nọdụ ala na-ekwu okwu na onye ọ bụla ọzọ banyere nsogbu gị. Ọ nwere ike na-eche ize ndụ, ma ọ dị mma ime nke a ngwa ngwa karịa mgbe e mesịrị, ma ị nwere ike na-achọpụta mkpa banyere gị ụbọchị n'oge ụka: otú ọ arịa ọrịa na nwere nnyapade achị. Ike idozi ndịrịta iche nke echiche bụ ezigbo egosi a na-adịgide adịgide mmekọrịta.
Ọ bụrụ na ị ma Pita hụrụ, ị na-ama gawa a ezi mmalite. Na-ekwurịta okwu nke na-ewe oge na-enwe onye ọ bụla ọzọ (na na na-na-enweghị gị anu ulo). Were oge na-eje ije dị iche iche, sniff ndị na-esi isi, na ogbugbo, meow, Squawk, na anuohia gị obi’ ọdịnaya!
Pịa ịkọrọ na Twitter (-Emepe ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Facebook (-Emepe ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Reddit (-Emepe ọhụrụ window)
7 Jọrọ njọ Eziokwu Banyere Modern dịwara
Anọ Common Mmekọrịta Nsogbu
5 Ihe ụmụ agbọghọ Mgbe a Gbasara
5 Iwu nke Ịbụ a Wingman
Isii Red ọkọlọtọ Iji ntụpọ na mbụ Ụbọchị
Na-eduga online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị website kere nanị maka Pita hụrụ. Ma ị na-achọ a ndụ ibe, a enyi n'ihi na gị Pita ma ọ bụ nanị onye na-fechapụta, ebe a ị ga-enwe ike ịchọta kpọmkwem onye ị na-achọ - Pita hụrụ dị ka onwe gị.
ọzọ & gt;
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Atụmatụ
+ Dịwara Ndụmọdụ
+ Ịhụnanya & Mmekọahụ
+ Mbụ Ụbọchị
+ Online dịwara Atụmatụ
+ Pet enyi na enyi
Na saịtị Info
Imeri anyị nnyemaka
© Copyright 2020 Ụbọchị My Pet. Mere na site 8celerate Studio